Iibhakhiti zeentloko zeSatin Zisondele ukuba Zibe Nkulu: Jonga ubungqina | Uhlobo Rave
HAmagqabantshintshi e-Afrika angaphantsi kwe-accessory kunye nokunye okunjengeesithsaba. Ke, nokuba uku-owambe (iqela eliphambili) okanye ukuhamba nje, ubhalo oluxhonywe ngokufanelekileyo luya kuhlala lulandelwa kukunconywa kunye nokunconywa. Okwangoku, i-satin headwraps ziyi-rave yonke kwaye akukho nzima ukubona ukuba kutheni.
Abafazi bahlala bejonge ezinye iindlela-ayikuko ukuba sifuna ukulahla ezo sele sinazo, kodwa njengoko besitsho, ukwahluka sisiqalo sobomi.
Kwimisitho efana nemitshato, ukunikezelwa kwabantwana kunye neepati zomhla wokuzalwa, ukunxiba i-headwrap okanye i-gele, yindlela entle yokusebenzisa isitayela esiphefumlelwe ngokwenkcubeko. Kodwa uza kuthini xa kusonga intloko entloko ngealaphu zesiko njenge Aso Oke, i-Damask okanye ibrosha ayiyonto yakho? Kuba sonke siyaqonda ukuba iiyure ezinde ezichithwe kule mibhiyozo zihlala zishiya iintloko zethu neendlebe zethu zibuhlungu. Endaweni yokutsiba iphepha lokugcina entloko xa lilonke, njengoko uninzi lwamabhinqa lusenza, ngesi sizathu, kuya kufuneka uthathele ingqalelo iphepha le-satin.
Umlingisi Ini Dima-Okojie
Isiphatho sentloko se-satin lukhetho oluguquguqukayo kunye nolunqabileyo, okanye ubeke nje, luyinto enokwenzeka namhlanje; enye leyo Ini Dima-Okojie yamkela. Zigudile kwaye ziyabukeka kwaye zikhumbuza ukuba umakazi usisityebi ohamba nje ebomini.
Mva nje, sibone inani elikhulu lamanenekazi egungxula imbonakalo yesithsaba se-satin kwaye asibonanga mntu Ephosakeleyo nayo. Yiloo nto ke sisazi ukuba le meko sele iza kukhula.
Khuthazeka koku kujongwa ngumculi weemveliso, Ariyike…
Ufuna ukukholiseka okungakumbi? Jonga le vidiyo ingqina ubuhle bentloko ye-satin…
Ua Mua @ariyike_mua
Iposi elibiwe I-ARIYIKEGLAMS💎 (@ariyike_mua) Ngo-Apr 3, 2019 kwi-11: 08pm PDT
Ifoto yetyala: IG | Ariyike_mua
ifashoni yentloko Isitayile sephepha entloko isitayile seentloko Imvakalo yentloko ephezulu Inkqubo entsha yokubhalwa kwentloko Iphepha elitsha le-satin imfashini entsha ye-satin yentloko satin intloko yentloko Imfashini yentloko kaSatin isitayile se-satin sentloko satin intloko yentloko yomkhwa
UJessica Agorye Ngamana 13, 2019
I-Rave News Digest: I-BAFTA, i-NLC I-Protocol yeLizwe lonke, i-Premier League Wrap + Okungakumbi